ROM 7 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (ROM 7)
Ọ̀ pụtara na unu amatabeghị ụmụnna m, na ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, iwu enwekwaghị ike ọ bụla nꞌebe ọ nọ? Ọ bụ unu ndị maara iwu ka m na-agwa okwu a.
Ka m nye ihe ịma atụ: Mgbe nwanyị lụrụ di, ọ bụ iwu na-ejikọta di na nwụnye ahụ tutuu otu nꞌime ha anwụọ. Ọ bụrụ na di nwanyị ahụ anwụọ, nwanyị a anọkwaghị nꞌokpuru iwu jikọtara di na nwụnye.
O nwere ike pụọ lụrụ di ọzọ, ma ọ chọọ. Ma ọ ga-abụ ihe megidere iwu ma ọ lụọ dị ọzọ mgbe di ya ka dị ndụ.
Nꞌụzọ dị otu a, unu onwe unu dị ka nwanyị lụrụ di. Na mbụ, di unu bụ iwu ndị Juu. Ma mgbe Kraịst nwụru, unu soro ya nwụọ. Nꞌihi nke a, ebe a gụrụ unu na ndị nwụrụ anwụ, ihe ọ bụla ejikọtakwaghị unu na iwu ndị Juu. O nwekwaghị ike ọ bụla nꞌebe unu nọ. Mgbe Kraịst biliri nꞌọnwụ, unu sokwara ya bilie bụrụ ndị dị ọhụrụ. Ugbu a, onye na-alụ unu bụ onye ahụ si nꞌọnwụ bilie. Ọ na-alụ unu ime ka unu nwee ike ịmị ezi mkpụrụ, nke bụ ezi omume nye Chineke.
Mgbe anụ ahụ mmehie na-achị unu, ọchịchọ ọjọọ jupụtara nꞌime unu, na-eme ka ọ na-agụ unu agụụ ime nanị ajọ omume nke iwu Chineke megidere.
Ma ugbu a, ebe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ nꞌebe iwu kere anyị agbụ dị, a napụtakwala anyị site nꞌaka ya, ime ka anyị bụrụ ndị sitere nꞌụzọ ọhụrụ nke Mmụọ na-ejere Chineke ozi. Ọ bụkwaghị nꞌụzọ ochie nke iwu e dere ede si chọọ.
Ugbu a, ụmụnna m, ihe anyị na-ekwu nꞌebe a abụghị na iwu Chineke bụ ihe ọjọọ. Mba! O nweghị ụzọ iwu si bụrụ ihe ọjọọ, kama ọ bụ iwu mere ka m mata ihe mmehie bụ. Agaraghị m eche echiche ime ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na iwu asịghị, “Echela echiche ime ihe ọjọọ.”
Ma mmehie sitere nꞌiwu a megidere ọchịchọ ọjọọ, mee ka echiche m mgbe nile bụrụ ihe gbasara ihe ọjọọ, na otu m ga-esi mee ha. A sị na iwu adịghị, mmehie agaraghị adị.
Mgbe m na-amaghị ihe iwu chọrọ ka m mee, ana m eche na m nọ na-ebi ezi ndụ, ma mgbe m mụtara eziokwu dị nꞌime iwu e dere ede, amatara m na m bụ onye gba aka, onye ikpe ọnwụ dị na-eche, nꞌihi na ọ dịghị iwu ọ bụla m debere.
Iwu ahụ kwesịrị izi m ụzọ m ga-esi nweta ndụ juru afọ, ka m chọpụtara na ọ bụ ikpe ọnwụ ebighị ebi ka ọ na-eduba m.
Ma ọ bụ mmehie ghọgburu m! Nꞌihi na mmehie ji ezi iwu ahụ Chineke nyere gbaara m ọnya, ime ka m bụrụ onye ikpe ọnwụ mara.
Ma nꞌezie, iwu ahụ bụ ihe dị nsọ, bụrụkwa ihe dị mma.
Olee otu iwu siri bụrụ ihe dị mma? Ọ̀ bụghị iwu wetara ikpe ọmụma? Ò si aṅaa bụrụkwanụ ihe dị mma? Ka m kọwaa. Ọ̀ bụghị iwu bụ ihe dị njọ, kama ọ bụ mmehie bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ. Nꞌihi na ọ bụ mmehie weere iwu dị mma, mee ka e site na ya wetara m ikpe ọmụma. Ị hụla ka mmehie si bụrụ nnọọ ihe arụrụ ala na ihe aghụghọ na ihe na-eweta ọnwụ? O ji iwu ọma Chineke mere ngwa ọrụ ihe ọjọọ ya.
Ka anyị site nꞌụzọ ọzọ lee ya anya, ịwu bụ ihe dị mma, ma ebe nsogbu a nile si bụ nꞌaka m. Adịghị m nsọ nꞌihi na abụ m onye e refuru erefu, dị ka ohu, nye nꞌaka mmehie. Ọ bụkwa mmehie na-achị ndụ m.
O nweghị ụzọ ụdị ndụ m na-ebi si doo m anya. Nꞌihi na mgbe ọ bụla m chọrọ ime ihe dị mma, ọ naghị ekwe m, kama ihe ahụ m kpọrọ asị bụ ihe na-agara m aka ime mgbe nile.
O doro m anya na ihe ndị a nile m na-eme jọrọ njọ, akọnuche m na-agbakwa ama nꞌime m banyere ihe ọjọọ ndị a, na-egosi na o nwere akụkụ ahụ m kwenyere na ihe iwu kwuru bụ eziokwu.
Ma ịkwụsị ime ihe ọjọọ ndị a bụ ihe nyịrị m. Agbalịala m ka ike m nile ha, ma enweghị m ike inyere onwe m aka, nꞌihi na ọ bụkwaghị mụ onwe m na-eme ihe ọjọọ ndị a, kama ọ bụ mmehie bi nꞌime m, nke dị ike karịa m, na-akwanye m ime ihe ndị a.
O doro m anya na ọ bụ nanị ihe ọjọọ jupụtara nꞌime m. Enweghị m ike mee otu ihe dị mma. Ọtụtụ mgbe ọ na-agụ m ka m mee ihe dị mma ma anaghị m eme ya.
Mgbe ọ bụla m chọrọ ime ezi ihe, anaghị m eme ya. Ma mgbe ọ bụla m jisiri ike chọọ ịhapụ ime ihe ọjọọ, ọ bụ ihe ọjọọ m na-achọghị ime ka m na-eme.
Eziokwu pụtara ìhè bụ nke a, ọ bụrụ na m na-anọgide na-eme ihe ọjọọ m kpọrọ asị, ọ dịkwaghị otu ọzọ a ga-esi kọwaa omume a, karịakwa na mmehie ahụ dị nꞌime m, eriela m ahụ, mee ka m na-eme nanị ihe ọ chọrọ.
Nꞌihi na ahụla m ya na ndụ m, na tupuu m cheta echiche ime ihe dị mma, echiche ọjọọ eburularị ụzọ were oche nꞌime m.
Ewoo! Onye nwụrụ anwụ ka m bụ! Onye pụrụ ịzọpụta m site nꞌanụ ahụ ochie m nke na-eduba m nꞌọnwụ?
Ma ekele dịrị Chineke site na Kraịst Jisọs Onyenwe anyị! Ana m eji mmụọ m nile na-ejere iwu Chineke ozi, ma nꞌanụ ahụ m, abụ m ohu mmehie.